March 2018 – Kalfadhi
Xildhibaan Hani Maxamed Aadan
March 27, 2018 Kalfadhi
Hani Maxamed Aadan oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadkii 1990-kii. Waa markii ugu horreysay oo ay kursi ku yeelato Baarlamaanka. Deegaan-doorashadeeda waa Koonfur-galbeed. Doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo bishii Nofeembar ee sanadkii 2016 ayay ku soo baxday. Waxbarashada & Takhasuska Muqdisho oo ay ku dhalatay, kuna barbaartay ayay wax ku baratay. Intii u dhaxeysay sanadihii 2001 ilaa 2006 waxay dhigatay dugsiga hoose-dhexe ee Al-Subeyr. Sanad-dugsiyeedkii 2006-2007 waxay sidoo kale dugsiga dhexe ka dhameysay dugsiga Cabdullaahi Ciise, iyadoo 2007…
Maxaa hortaagan dhismaha Maxkamadda Dastuuriga?
March 22, 2018 March 22, 2018 Kalfadhi
Dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya ayaa dhigaya dhismaha maxkamad dastuuri ah oo uu dalku yeesho. Maxkamaddaasi waa garsooraha kama dambeysta ah ee arrimaha dastuurka. Waxaa awood loo siiyay fasiraadda dastuurka; go’aan-ka-gaarista khilaafaadka, xilalka iyo awoodaha u dhexeeya hay’adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka, dowlad-goboleedyada iyo dhaqan-gelinta sarreynta dastuurka si madax-bannaan oo xor ka ah fara-gelin kaga timaada heer kasta oo hay’adaha dowladda ah. Maxkamadda dastuuriga ah waxay yeelaneysaa shan garsoore oo midkiiba aysan da’iisa ka yaraan karin 40 sano, kuwaas oo leh kaaliyeyaal, howl-wadeenno iyo shaqaale kale. Garsooraha sare ee…
Dowladda Hoose Warar
Degmooyinka Muqdisho qaar oo laga billaabay bixinta kaararka iyo shatiyada dowladda hoose
March 13, 2018 Kalfadhi
Maamulka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa koowdii Maarso dib u howlgeliyay xafiisyada adeegga ee heer degmo. Xarumahan waxay shacabku ka heli doonaan adeegyada kala ah; shatiyada, dhalashooyinka iyo sugnaanta, kaararka aqoonsiga ee dowladda hoose iyo nootooyinka oo markii hore loo doonan jiray xarunta gobolka, sida uu sheegay duqa magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow). Duqa magaalada oo ka hadlayay daah-furka xafiisyadan ayaa shaaciyay in xarumahan cusub ay billow u yihiin daadajinta adeegyada bulshada. Wuxuu shaqaalaha dowladda hoose kula dardaarmay inay shacabka ugu adeegaan si hufan. Xafiisyadan waxaa laga hirgeliyay…
M/weyne Farmaajo oo furay Kalfadhiga 3-aad ee Barlamaanka Soomaaliya
March 10, 2018 Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta daah furay kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay u wada dhamaayeen mudanayaasha labada aqal. Gudoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo Gudoomiyaha Golaha shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo xubnaha Barlamaanka ayaa madasha maanta joogay. Wadajirka xildhibaannada ayaa maanta xaadiray iskuulka tababarka ciidanka Booliska Soomaliyeed ee General Kaahiye halkaa oo ay ka dhacaysay xaflada daah furka kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka. Xaflada daah furka Kalfadhigaan waxaa lagu casuumay Gudoomiyaasha Baarlamaanada Maamul goboleedyada dalka iyo Gudoomiyaha Gobolka Benaadir. Xildhibaanno cusub ayaa maanta…